GAA NA MP4 ONLINE NTỤGHARỊ - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
Isi Ọrụ ntanetị
Gwa MOV ka MP4 site na ntanetị
Windows OS na-enyefe ya na ngwaọrụ niile mpụga na nke etiti na PC, akwụkwọ ozi site na mkpụrụ edemede si A ruo Z, dịnụ n'oge ahụ. A nabatara na akara akara A na B na-echekwa diski disks, na C - maka usoro disk. Ma ụdị automatism apụtaghị na onye ọrụ enweghị ike ịmepụta onwe ya na mkpụrụedemede ndị a na-eji akọwapụta disk na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Kedu ka m nwere ike isi gbanwee akwụkwọ mpịakọta na Windows 10
Na omume, aha akwụkwọ ozi mbanye bụ ihe na-abaghị uru, ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ chọrọ ịhazi usoro ahụ iji kwado ya ma ọ bụ ụfọdụ mmemme na-adabere n'ụzọ zuru ezu akọwapụtara na initialization, mgbe ahụ, a ga-arụ ọrụ dị otú ahụ. Dabere na nlele ndị a, tụlee otú ị nwere ike isi gbanwee akwụkwọ mpịakọta ahụ.
Usoro 1: Acronis Disk Director
Acronis Disk Director bụ mmemme a kwụrụ ụgwọ nke na-abụ onye ndu na azụmahịa IT maka ọtụtụ afọ ugbu a. Ọrụ ike na ịdị mfe nke iji mee ka ngwanrọ a bụrụ onye inyeaka na-eguzosi ike n'ihe nye onye ọhaneze. Ka anyị nyochaa otu esi edozi nsogbu nke ịgbanwe akwụkwọ edemede ahụ na ngwaọrụ a.
Meghee usoro ihe omume ahụ, pịa diski nke ịchọrọ ịgbanwe akwụkwọ ozi ahụ ma họrọ ihe kwekọrọ na ya site na menu.
Nye akwụkwọ ozi ọhụrụ na mgbasa ozi wee pịa "OK".
Usoro 2: Aomei Partition Assistant
Nke a bụ ngwa nke ị nwere ike ijikwa diski PC gị. Onye ọrụ ahụ nwere ọrụ dịgasị iche iche maka ịkepụta, ịkekọrịta, ịghaghachi, imegharị, ịmekọrịta, ihicha, ịgbanwe akara, yana ịmegharị ngwaọrụ disk. Ọ bụrụ na anyị na-atụle usoro ihe a na ọrụ nke ọrụ, mgbe ahụ, ọ na-arụ ya n'ụzọ zuru oke, ma ọ bụghị maka disk diski, kama maka ọdịdị os ndị ọzọ.
Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe akwụkwọ ozi nke diski na-abụghị usoro, soro usoro ndị a.
Download ngwá ọrụ site na akwụkwọ ọrụ ma wụnye ya.
Na nchịkọta nhọrọ nke usoro ihe omume ahụ, pịa disk ịchọrọ ịmegharị aha, wee si na menu họrọ ihe ahụ "Di elu", na mgbe - "Gbanwee akwụkwọ ozi mbanye".
Nye akwụkwọ ọhụrụ ma pịa "OK".
Usoro nke 3: Jiri nchịkọta Disk Management snap-in
Ụzọ kachasị aga n'ihu iji mepụta ọrụ ịmegharị aha bụ iji ụdị ngwá ọrụ a maara nke ọma "Njikwa Disk". Usoro ya onwe ya bu ihe ndia.
Achọrọ ka ị pịa "Merie R" na window Gbaa ọsọ ewebata diskmgmt.mscwee pịa "OK"
Ọzọ, onye ọrụ ga-ahọrọ ọkpụkpọ nke a ga-agbanwe akwụkwọ ozi ahụ, pịa aka na ya ma họrọ ihe egosiri na mbiet dị n'okpuru ebe a na menu ihe.
Mgbe ịpịrị bọtịnụ ahụ "Gbanwee".
Na njedebe nke usoro ahụ, họrọ akwụkwọ mpịakọta chọrọ ma pịa "OK".
Okwesiri iburu n'uche na oru omuma a nwere ike ibute n'eziokwu na ufodu mmemme nke jiri akwukwo ugbua eji eme ihe mgbe emeputara ya ga akwusi ibanye. Ma nsogbu a edozi ma ọ bụ site na iwegharị software ma ọ bụ site na ịhazi ya.
Usoro 4: "Ntọala"
"AHỤ" bụ ngwá ọrụ nke ị nwere ike ijikwa mpịakọta, akụkụ na diski site na akara iwu ahụ. Nhọrọ mara mma maka ndị ọrụ dị elu.
Usoro a adighi akwadoro maka ndi mbido, n'ihi na "AHỤ" - ihe bara uru nke bara uru, mkpochapụ nke iwu na ntughari na-enweghị isi nwere ike imerụ sistemụ arụmọrụ.
Iji jiri ọrụ DISKPART gbanwere akwụkwọ ozi mbanye, ị ga-agbaso usoro ndị a.
Meghee cmd na ikike ha. Enwere ike ime nke a site na menu "Malite".
Tinye iwudiskpart.exewee pịa "Tinye".
O kwesiri iburu n'uche na n'ihu mgbe ọ bụla nyere iwu ka ị pịa bọtịnụ ahụ "Tinye".
Jirindepụta ndepụtamaka ozi gbasara mpịakọta diski ziri ezi.
Họrọ nọmba diski ziri ezi na iji iwuhọrọ olu. Na ihe atụ, a họrọ drive D, nke bụ nọmba 2
Nye akwụkwọ ozi ọhụrụ.
N'ụzọ doro anya, e nwere ụzọ zuru ezu iji dozie nsogbu ahụ. Ọ ka na-ahọrọ nke kachasị amasị gị.
Norton Internet Nche 22.12.0.104
Na-agbanwe ODS ka XLS
Ịwụnye fon TTF na kọmpụta
Ihe mere BIOS anaghị arụ ọrụ
Na-ezipụ ozi ezighi ezi VKontakte
Mgbe ị na - eji akwụkwọ Excel na - arụ ọrụ, ọ na - adịkarị mkpa iji rụọ ọrụ niile na data. N'otu oge ahụ, ọrụ ụfọdụ na-egosi na otu mkpụrụ ndụ niile ga-agbanwe n'ụzọ nkịtị n'otu ibe. Na Excel enwere ngwaọrụ ndị na-enye ohere maka arụmọrụ dị otú ahụ. Ka anyị chọpụta otu esi ejikwa ihe ndekọ data na usoro ihe a. GụKwuo
Otu esi achọpụta paswọọdụ gị na netwọk Wi-Fi
Iweghachite faịlụ na R.Saver
https://termotools.com ig.termotools.com © Ọrụ ntanetị 2019